Moscow Sheremetyevo ayaa loogu magac daray Madaarka ugu Waqtiga Badan Yurub
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airport » Moscow Sheremetyevo ayaa loogu magac daray Madaarka ugu Waqtiga Badan Yurub
Airlines • Airport • Jebinta Wararka Yurub • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Waajib ah • Wararka Ruushka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Sheremetyevo wuxuu ahaa garoonkii ugu horreeyay ee Ruushka ee horumariya oo hirgeliya nidaam go'aan-wadaag wadajir ah la leh shirkadaha diyaaradaha, isagoo adeegsanaya keydka Synchron ee hal-abuurka leh.
Sheremetyevo waxay ka mid tahay 5 -ta xarumood ee madaarka ee Yurub.
Sheremetyevo waa gegida dayuuradaha ee ugu weyn Ruushka marka loo eego rakaabka iyo xamuulka.
Sanadkii 2020, Sheremetyevo waxay u adeegtay 19 milyan 784 kun oo rakaab ah.
Moosko Madaarka Caalamiga ah ee Sheremetyevo waxaa loo aqoonsaday inuu yahay gegida dayuuradaha ee ugu wakhtiga badan Yurub iyo kan labaad ee ugu waqtiga badan caalamka ee ku jira qaybta Garoomada Caalamiga ah.
Thanks to iskaashi wax ku ool ah oo ka dhexeeya garoonka diyaaradaha, shirkadaha diyaaradaha iyo wakaaladaha hagista hawada, Sheremetyevo aerodrome waxay haysay awood sare waxayna xaqiijisay heer sare oo duulimaadyo ah. Sheremetyevo wuxuu ahaa garoonkii ugu horreeyay ee Ruushka ee horumariya oo hirgeliya nidaam go'aan-wadaag wadajir ah la leh shirkadaha diyaaradaha, isagoo adeegsanaya keydka Synchron ee hal-abuurka leh.
Gaadiidleyda ugu waqtiga badan ee Sheremetyevo bilaha May iyo Juun 2021, oo ku saleysan soo degitaanka, ka tagista aagga baarkinka iyo qaadista, waxay ahaayeen:
Diyaaradaha Yurub leh in ka badan 200 duulimaad oo rakaab ah:
Diyaaradaha Yurub oo leh wax ka yar 200 duulimaad oo rakaab ah:
Diyaaradaha leh in ka badan 500 duulimaad oo xamuul ah:
Diyaaradaha leh wax ka yar 500 duulimaad xamuul: